1. Ukushayela ikhompyutha ngokushesha: Igama elibomvu "ngicela uhlole amabhuleki wepads" lizovela ngasohlangothini lwe-alamu jikelele. Bese kuba nesithonjana, okuyindilinga ezungezwe ngabakaki abambalwa abadiliziwe. Ngokuvamile, kukhombisa ukuthi isondele kumkhawulo futhi idinga ukushintshwa ngokushesha. 2. Isibindi ...Funda kabanzi »
Yini i-Best Brake Pad Material?
Kusuka kokupholisha nakuma-wax, ukuhlunga kanye ne-oyili yenjini, ukukhetha kukhulu futhi kuyesabeka uma kukhethwa imikhiqizo efanelekile yemoto yakho, iloli, i-coupe noma i-crossover. Izinketho ziningi — futhi enye nenye indlela inezimpawu zayo ezihlukile, izethembiso nobuchwepheshe. Kepha yini okuhle kakhulu ...Funda kabanzi »
Ngazi kanjani ukuthi ngidinga ama-brake pads amasha?
Izimpawu zokuthi udinga ama-brake pads amasha. Imvamisa, uzokwazi ukusho ukuthi ama-brake pads akho agqoke nini ngenxa yezinguquko ezilethayo emotweni yakho. Nazi ezinye zezimpawu ongazibona uma sekuyisikhathi sokuthola ama-brake pads wakho atshintshwe: Umsindo wokugaya noma wokuklabalasa lapho uzama ...Funda kabanzi »